गौतम बुद्ध र मूर्तिपूजा « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
« एउटै बिहारमा १३ हजार बुद्धमूर्ति
ओशो सेन्टर लण्डनमा कवितारामका पुस्तक बिमोचित »
बुद्धको समयमा मूर्ति पूजाको प्रचलन नै थिएन त ? त्यस्तो होइन । बुद्धभन्दा निकै अघि अर्थात् ई.पूं ३००० मा उत्थान भई ई.पू. १७५० मा पतन भएको सिन्धुघाटीको सभ्यताको उत्खननका क्रममा प्रशस्त मात्रामा शिवलगायतका मूर्तिहरू पाइएको छन् । जसको अर्थ त्यति बेला मूर्ति पूजा हुन्थ्यो । सिन्धुघाटीको सभ्यताको पतनदेखि बुद्ध धर्मको उत्थान -ई.पूर्व १७५०-५२८) को अवधीको भारतीय इतिहास अन्धकार युगमा नै रहेको छ । त्यस अवधिमा वैदिक संस्कृतिको प्रवेश वा विकास भारतीय भूमिमा भएको थियो । अनेकोैं प्रसङ्गमा वैदिकहरू मूर्तिपूजाको विरोधी हो कि भन्ने लाग्दछ तर वैदिक नेताहरूले पनि मूर्ति पूजा गरेको नभेटिने पनि होइन । तत्कालीन समाजमा लिङ्ग पूजकहरूलाई निकै हेयदृष्टिले हेरिन्थ्यो कहीँकहीँ लिङ्ग पूजा गरेकै दोषमा पूजकहरू दण्डित पनि हुन्थे । सरूमा शैव धर्म वैदिक धर्मअन्तर्गत पर्दैनथ्यो र इतर धर्म भनी दमन गरिएको हुन सक्छ । यसले तत्कालीन धार्मिक स्थितिको बोध हुन्छ । तर पछि शैव धर्म वैदिक धर्ममा समाहित गरियो । रामले लिङ्ग पूजा गरेको वर्णन रामायणमा पाइन्छ । यसरी नै इन्द्रको मूर्ति बेच्नलाई राखिएको प्रसङ्ग पनि पाइन्छ । होम र यज्ञलाई नै प्रधानता दिने वैदिकहरू सिद्धान्ततः मूर्ति पूजाका विरोधी देखिए पनि पछिल्ला समयहरूमा मूर्तिपूजालाई प्रश्रय दिन थालेको देखिन्छ । यस बेलामा मूर्तिकलाको विकास उल्लेख्य रूपमा भएको पाइन्न । यही पृष्ठभूमिमा गौतम बुद्धको उदय भएको थियो । वास्तवमा बुद्धले मूर्तिपूजाका सम्वन्धमा केही नबोल्नु तत्कालीन समाज मूर्तिपूजामा आशक्त थिएन वा त्यसको प्रभाव कम मात्र थियो । बुद्धले अन्य कुरामा भन्दा ध्यान, अध्ययन, चिन्तनमनन जस्ता कुरामा जोड दिन्थे ।
मगध -भारत) का राजा बिम्बिसार र श्रीलंकाका राजा उत्रयानबीच मित्रता थियो र उपहार आदानप्रदान गरी उनीहरू आफ्नो मित्रतालाई प्रगाढ बनाइराखेका थिए । बुद्धका उपासक समेत रहेका राजा बिम्बिसारले एकपल्ट कुशल चित्रकारबाट बुद्धकै चित्र बनाउन लगाई अति विशिष्ट उपहारका रूपमा पठाइए । यो चित्रकलालाई तत्कालीन भारतीय व्यापारीहरूले श्रीलंकामा अर्थ लगाएको र पछि श्रीलङ्काको अनुरोधमा थुप्रै भिक्षुहरू श्रीलङ्का पठाइएको प्रसङ्गबाट श्रीलङ्कामा बुद्ध धर्म बुद्धकै जीवनकालमा पुगेको बोध हुन्छ ।
बौद्धहरूले बुद्धको मूर्ति नबनाउनुमा एउटा तर्क रहेको छ- के को आधारमा बुद्धको मूर्ति बनाउने ? आकृतिमा हुबहु नआउने र यसले शास्ता
-गौतम बुद्ध)प्रति अनादर हुने ठानी मूर्ति नबनाएका हुन् । तर ग्रीक कलाकारले गान्धार क्षेत्रमा विकास गरेको बुद्ध मूर्ति ग्रीक कलाबाट प्रभावित मात्र नभई बुद्धको आकृति बनाउँदा उनीहरूका देवता ‘अपोलो’को मूर्तिलाई बनाएका थिए । ग्रीकहरूले बुद्धको मूर्ति बनाए पनि तत्कालीन समाजमा केन्द्रको रूपमा रहेको मथुराले सो मूर्तिलाई सहज रुपमा स्वीकार्न सकेको देखिएन । बुद्धका मूर्तिहरूले ठाउँ पाउँदै गएपछि बाध्य भएर मथुराकलामा पनि पछि बुद्धको मूर्ति मौलिक शैलीमा प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । यस प्रसङ्गबाट के बुझ्न सकिन्छ भने बौद्धहरूले बुद्धको मूर्ति नबनाउनु श्रद्धाले हो तर कुनै प्रतीकमाथि त पूजा गरिंदै आएको हो । बुद्ध जीवितै छँदा पनि बौद्धहरू बुद्धको अभिवादन गर्न जान्थे र बुद्धका कुराहरू सुनेर र्फकन्थे । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि बौद्धहरूले बुद्धको ठाउँमा उनको प्रतीकमा र पछि मूर्तिमा पूजा तथा अभिवादन गरी धार्मिक अभ्यासमा निरन्तरता दिंदै आएका कारण यहाँ कसैले पनि आपत्ती नजनाइएको हो ।
सिद्धार्थले ई.पू. ५२८ मा बोधिज्ञान लाभ गरेर बुद्ध बनेपछि सर्वप्रथम पाँच जना सन्यासीले गौतम बुद्धको शिष्यत्व स्वीकार गरी भिक्षु बनेका थिए । यसपछि काशीका एक महाजनका छोरा यशकुमार र उनका साथीहरू गरी साठी जनाको सङ्ख्यामा भिक्षु सङ्घ बनेको थियो । त्यो सानो समूहबाट प्रचारप्रसार भई बुद्ध धर्म अहिले संसारभर फैलिएको छ । यस धर्मको विकास क्रममा थुप्रै सम्प्रदायको उदय भएको छ । यसरी नै बौद्ध कलाले पनि थुप्रै फड्को मार्‍यो । बुद्ध दर्शनको विकासका क्रमले हाल मुख्यतः हिनयान -थेरवाद) महायान र वज्रयानको विकास भएको पाइन्छ । यी तिनै यानसँग बेग्लाबेग्लै कला र संस्कृतिको पनि विकास भयो । गौतम बुद्धबाटै उनीसहित सात मानव बुद्ध रहेको कुरा स्वयं बुद्धबाट थाहा भएको थियो भने त्यसपछि बज्रयानले पञ्चबुद्ध -रत्नसंभव, वैरोचन, अक्षोभ्य, अभिताभ, अमोघसिद्धि) भनी अन्य पाँच बुद्धको कल्पना गर्‍यो । यी बुद्धहरूका मूर्तिहरुलाई झट्ट हेर्दा गौतम बुद्धकै जस्तो देखिन्छ प्रचलित गौतम बुद्धकै जस्तो देखिन्छ, सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने मात्रै छुटिन्छ । पंचबुद्धअन्तर्गत पनि अनेकौं बोधिसत्वहरूको कल्पना गरियो । यसप्रकार गौतम बुद्धकै आकृतिमा थुप्रै अन्यको मूर्तिको विकास भयो । काठमाडौँस्थित स्वयम्भूमा मात्रै छसयभन्दा बढी बौद्ध मूर्तिहरू असरल्ल छरिएर रहेका छन् तर त्यहाँ तीसपैतीस भन्दा बढी गौतम बुद्धका मूर्तिहरू छैनन् । यही उदाहरण अन्यत्र पनि लागू हुन्छ । तसर्थ सबै मूर्तिलाईर् गौतम बुद्धको मूर्ति देख्नु भ्रममा फस्नु हो ।
(Gorkhapatra National Daily 2nd Oct. 2010)
This entry was posted on October 4, 2010 at 4:46 am	and is filed under लेख / रचना.